Ra’iisul wasaare Kheyre oo daahfuray dood wadaag ku saabsan ganacsiga-Sawiro – Radio
Ra’iisul wasaare Kheyre oo daahfuray dood wadaag ku saabsan ganacsiga-Sawiro
November 18, 2018	63	Like
“Waxaan rajeynayaa inaan laga hadlin, maxaan ahaan jirnay iyo maxaan hadda nahay ee laga hadlo maxaan noqon karnaa? Waxaan rajeynayaa inaan laga hadlin 30 sano ayaa naga luntay ee laga hadlo sidii aysan daqiiqad kale nooga lumi lahayn. Waxaan rajeynayaa in ganacsatadu aysan dowladda sugin oo ay aqbalaan in ay iyagu dowladda yihiin”, ayuu yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
Muxuu daaran yahay safarka Isimada Puntland ee Laascaanood?
waftiga ayaa halkaasi u tegay sidii loo damin lahaa colaada u dhaxaysa labo beelood oo ...